क्रिश्चियनका अगुवा नै राजा र हिन्दु राज्यको पक्षमा ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	क्रिश्चियनका अगुवा नै राजा र हिन्दु राज्यको पक्षमा ! » Nepal Fusion
क्रिश्चियनका अगुवा नै राजा र हिन्दु राज्यको पक्षमा !
२०७६ भाद्र २७ गते शुक्रवार
क्रिश्चियन धर्मका अगुवा डा। केबी रोकायाले नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्ने मान्यता राखेका छन् । केही दिनअघि एक रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । देशभर हिन्दु राष्ट्रको आवाज उठिरहँदा रोकायाले पुन एकपटक आफ्नो माग दोहोर्‍याएका हुन् ।
उनले सबै धर्मको रक्षाका लागि नेपाल हिन्दु राज्य हुन आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् । उनले मुलुकको प्रगति र राष्ट्रिय एकताका लागि गणतन्त्र उचित नहुने मान्यता पनि राखेका छन् । उनले भने- नेपालमा अब कुनै न कुनै रुपको राजसंस्था आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि राजा चाहिएको हो ।
धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रु नेपालीको एजेन्डा नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । बाहिरबाट लादिएको मुद्दाले मुलुकको भलो नहुने उनको ठम्याइ छ । राजतन्त्र र देशभित्रका सबै धर्मको रक्षाको लागि नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना अपरिहार्य रहेको उनको मान्यता छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका रोकाया राजा र धर्मको मुद्दामा पुनर्विचार नगरिए सबै धर्मको विनाश हुने र राष्ट्रिय अस्तित्वमा स‌ंकट आउन सक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।